Fentanyl: ọgwụ 50 Times More nke nwere ike Than heroin - News Ọchịchị
Fentanyl: ọgwụ 50 Times More nke nwere ike Than heroin
nke 69 egbu egbu nnyefere tara afọ gara aga, 68% ewepụwo sịntetik opioid, nke Mexico cartels mụtara ime na smogul ka interstate okporo ụzọ awara awara. Ọgwụ 'bụ ihe a na-egbu anyị ụmụ amaala,'-Ekwu Manchester si onyeisi ndị uwe ojii
Isiokwu a na-akpọ “Fentanyl: ọgwụ 50 ugboro ọzọ nwere ike karịa heroin ọdachi New Hampshire” e dere site Susan Zalkind na Manchester, New Hampshire, n'ihi na theguardian.com on Thursday 4th February 2016 12.30 UTC
Officer Shaun McKennedy mbụ nnyefere oku na-aga na-abịa na na 6.39pm. Ọ amama ke sirens on na rushes n'aka 245 Laurel n'okporo ámá, a ebughi oke ibu ulo ụlọ. E nwere onye na hapụrụ nwa e ji ebu ihe na n'ihu ụlọ. A nwoke yi a Bride nke Chucky uwe elu peeps si na ya doorway dị ka McKennedy, 24, rushes elu.
Ọtụtụ ụmụ nwoke ndị bụ mgbanyụ ọkụ ógbè na EMT ngalaba na-ama na e nwere, hovering gburugburu yiri ozu a 31-afọ nwoke na ndụ ụlọ n'ala a Nrịrọ mmiri T-uwe elu na jeans. Ọ bụ a ọnọdụ McKennedy, 24, kemgbe site na ọtụtụ ugboro kemgbe ọ ghọrọ onye ike ikpeazụ July.
"Larry! Larry! Nọrọ anyị!"Yells Justin Chase, a Manchester EMT dibịa Bekee. Ọ injects naloxone, a ọgwụ na ndakpọ mmetụta nke opioids, elu Larry n'imi.
-Aru-ya emee ka anya doo anya-ya abua gbapụta oghe. "Kedu nke na-eme?"Ọ na-ajụ, -enweghị blinking.
Larry kwenyere isoro ọfụma na-aga na mberede ụlọ na Elliot Hospital, ma ọ ga-abụ ọtụtụ izu tupu ule results chọpụta kpọmkwem ihe mere ka ya nnyefere. Ọ bụ mgbe mbụ ọ na-eme na, ọ na-agwa McKennedy mesịa n'abalị. -Emekarị ọ injects n'etiti abụọ na atọ grams nke heroin a ụbọchị; na mgbede ọ bụ naanị were .2 grams, ma ọ bụ a "pensụl". Ọ bụ n'aka ma ọ bụrụ na ọ overdosed n'ihi ya ya na ya na ndidi - ọ na-ekwu na ọ na-a dị ọcha maka nanị ihe karịrị ọnwa abụọ - ma ọ bụ ọ bụrụ na e tinyere fentanyl.
Dị ka Drug Administration Enforcement, fentanyl bụ a sịntetik opioid 100 ugboro ike karịa morphine, na 30-50 ugboro ike karịa heroin.
"Fentanyl bụ ihe a na-egbu anyị ụmụ amaala,"Kwuru Manchester onyeisi ndị uwe ojii Nick Willard na-agba akaebe n'ihu Congress urua.
Na 2013, obodo Manchester nwere 14 egbu egbu overdoses, 7% nke bụ nke gụnyere tara na fentanyl ha usoro, dị ka Willard. Na 2015, 69 ndị gbagburu overdosed, 68% bụ ndị e fentanyl.
The ala ọnụ ọgụgụ ndị mba ọzọ cheery. Isi n'ụlọ ọrụ, ndị isi ike na-enyocha ke New Hampshire-ekwu na ha nwere ma na-enweta ule results si 36 -enyo enyo overdoses, ma ha na-na na-agụ ná 399 egbu egbu nnyefere tara nnọọ, ihe karịrị ụzọ abụọ n'ụzọ atọ nke onye nwụrụ na fentanyl ha usoro.
"Ọ dịghị ka Mario Batali,"Kwuru Willard si ya ụlọ ọrụ dị na Manchester, atụnyere heroin na-ere ahịa ịcha ha ọkọnọ na famed isi. "Ndị a ụmụ okorobịa na-dị nnọọ na-atụba ya na a igwekota. Ị pụrụ inweta a akpa na nke ahụ bụ zuru okè na ọ dịghị onye gaje ịnwụ na ya. I nwere ike inwe a bag [nke ahụ bụ] ogologo fentanyl na nke ga-egbu unu. "
Willard kwuru na n'oge a na-adịbeghị anya wakporo na Manchester, ọ hụrụ a dealer agwakọta fentanyl na whey protein. Na ọzọ ọgbụgba nke dugara a ọdịdọ na Lawrence, Massachusetts, na dealer e kwuru agwakọta heroin na fentanyl na a kichin blender.
N'ihi na ọtụtụ akụkụ, sị Willard, akụkọ nke opiate ojiji na Manchester ndị a otu ihe nakawa etu esi ka ndị ọzọ nke mba. Na nsogbu e kpọpụrụ na site na ịrị elu nke ndenye ọgwụ ahụ mgbu ndị ka OxyContin. Riri ahụ na-achọ a dị ọnụ ala karịa elu ugboro ugboro chigharịkwuuru ọzọ ize ndụ, ma budata dị ọnụ ala karịa, heroin.
Ihe gbanwere, ọ na-ekwu, mere mgbe 2010, mgbe Purdue Ọrụ Ugbo gbanwere na ọgwụ iji mee ka o siere ya ike tamper na ma na-elu. Suppliers na Mexico ngwa ịnọgide na-burgeoning ahịa, na riri ahụ na Manchester, nke na-anọdụ nso n'Interstate 93, ụzọ 3, ụzọ 81, na Nsoro 9, o sighịrị tapping n'ime ọkọnọ.
Fentanyl 'bụ ihe a na-egbu anyị ụmụ amaala', -ekwu Manchester si onyeisi ndị uwe ojii. Foto: Alamy
Ka njọ n'ihi na Manchester, Dia gị n'ụlọnga Tim Desmond ekwu ọgụgụ isi na-egosi na Mexico cartels, Kpọmkwem El Chapo si Sinaloa Cartel, nwere ụba poppy mmepụta 50% ebe ọ bụ na afọ gara aga na e ezubere iche n'ebe ugwu-n'ebe ọwụwa anyanwụ.
Fentanyl mbụ e mepụtara na 1960 dị ka a n'ozuzu anestetiiki, na ọ ka na mgbe nile ndinọ site dọkịta, -emekarị n'ụdị lozenges na patches, ugboro ugboro n'ihi na cancer ọrịa.
Riri ahụ chọtara ụzọ eme ihe n'ụzọ na ndenye ọgwụ iche nke ọgwụ, site aṅụ na patches, ọmụmaatụ. Ma nso nso karịa, Mexico cartels mụtara otú e si eme ha fentanyl site importing ndị dị mkpa ọgwụ si China, mgbe ahụ smuggling ngwaahịa gafee ókè na on ka interstate okporo ụzọ usoro, kwuru Desmond.
The United States nwere fentanyl nsogbu tupu. n'etiti 2005 na 2007, karịrị 1,000 ndị mmadụ nwụọ na ya ọgwụ, ukwuu n'ime ke Midwest. Dị ka a pịa ntọhapụ site dia, niile nke ndị na anwụ pụrụ deere ka otu ụlọ nyocha na Mexico. Ozugbo dia mechie ụlọ nyocha, na fentanyl oria a ogu kwụsịrị kwa.
Nke a na oge gburugburu, na dia adịghị ma ezubere iche otu ụlọ nyocha na Mexico na-akpata nsogbu zuru na New England, kwuru Desmond. Kama, gọọmenti etiti elekọta mmadụ na obodo uwe ojii na-ezubere iche ebe na-ere ahịa. "Mgbe ụfọdụ, anyị na-amalite na ala nke nri yinye iji gbagoo n'ọkwá,"Ka o kwuru.
na Manchester, Willard na-arụ ọrụ ikpochapụ ndị ajọ ọrịa a ọgụ si n'ala bilie. Mgbe ọ ghọrọ onyeisi ndị na okpomọkụ nke afọ gara aga, o wezugara ya ọgwụ unit, ma nye iwu ndị ọrụ nchọpụta ijide-ere ahịa ọsọ ọsọ iji nweta ha anya n'okporo ámá, kama na-eche na-ewu a ọzọ nke mmezi ikpe ma ọ bụ na-arụ ọrụ ruo ọkọnọ akara.
Ọ na-na-arụ ọrụ na-ewu a na steeti na gọọmenti etiti ọrụ gbalụ gbalụ, akpọ Granite Hammer, bụ nke malitere na September gara aga; rute ugbu a, ọ na-ekwu, na unit mere ka 77 njide. Ọ na-akpọ maka na-abawanye na ala nkwado maka mgbake clinics.
McKennedy zara abụọ ọzọ nnyefere akpọ n'abalị ahụ. Mbụ nwoke nọ na ya mbubreyo 20s aha ya bụ Mark, onye ebe ke a launduromaati na otu agịga na ogwe aka ya na onye zuru, na njikere ịga. Mark bụ obere njikere eso ndị EMTs ụlọ ọgwụ.
"Ị chọrọ ịnwụ?"Jụrụ Chase.
"Ònye na-na na na ga-achọ ịdị ndụ na ndụ a?"Mark kwuru, sị Chase, bụ igbu onwe ideation, nke pụtara na EMTs na-achọrọ akpọrọ ya gaa ụlọ ọgwụ Ko. N'ụlọ ọgwụ, Mark jụrụ McKennedy ya heroin azụ.
The ọzọ oku na-aga bụ n'ihi na a nwanyị nọ ná mmalite 30s. Dawn Marie overdosed na a enyi ulo. Na ihe mmadụ abụọ doses nke naloxone ịtụte ya. Ya na enyi nwere ụmụ abụọ. Ha na-eme n'ịsụpe mkpụrụ okwu on a agba? Akwụkwọ a ụlọ ọzọ ụzọ.
Ndị ọzọ ọrụ nche zara a anọ nnyefere oku na-aga mgbe McKennedy nyeere EMTs ịga ka onye ọgwụ ọjọọ riri bụ ndị nwara ime ndụ ya na a kichin mma. Ọ ghọtara McKennedy si a gara aga nnyefere. "Ụbọchị ọzọ na paradaịs,"Ka o kwuru mgbe ahụ ojii gara na-uzọ.
Na a oge nke dịkwa nwayọọ, McKennedy nyere aka Officer Mark Aquino na a okporo ụzọ nkwụsị. Aquino bụ ọgwụ ude ọkachamara. Ọ na-esi ike karị ịmata riri ahụ, o kwuru, sị. Heroin dị mfe ịchọpụta, onye ọrụ ụmụ akwụkwọ na-ntà na pin-dị ka. "Fentanyl adịghị machibido ụmụ akwụkwọ,"Ka o kwuru. "Ha ikwe kama,"Ọ kọwara, idobe ya agba ya obi.
na 10.30, McKennedy laghachi na ngalaba edejupụta ede n'akwụkwọ aza ajụjụ maka oku. Ọzọ "na-agbanwe agbanwe" nnofega ke Manchester, o kwubiri. "Ọ dịghị ihe si na ndị nkịtị."
← Wii wii nwere ike ibutere Okwu Ọnụ Memory 10 nke Best Apps maka ego →